Yaan nahay - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Xarunta Kheyraadka Naafada iyo Naafada waxay kaa caawineysaa isbedelka nolosha
ADRCs waa fikrad Wisconsin ah oo loogu talagalay inay lashaqeeyaan dadka waaweyn, dadka naafada ah, iyo daryeelayaashooda, iyaga oo awood u siinaya inay ku noolaadaan noloshooda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Waxaan halkaan u nimid inaan kula wadaagno dhammaan isbeddelada iyo caqabadaha nolosha. ADRC ee Degmada Brown waxay bixisaa adeegyo ballaaran oo isugu jira waxqabadyo, dhacdooyin, iyo aqoon isweydaarsiyo, si looga caawiyo caqabadaha gabowga iyo naafada.
Ma ku jirtaa adduun cusub oo booqashooyinka dhakhtarka ah, xaaladaha caafimaad, go'aannada maaliyadeed, dayactirka guriga ama dayactirka? Liisku wuu socdaa! Miyaad ka badatay oo aadan hubin waxaad weydiisato? Noo sheeg sheekadaada, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno!
ADRC ayaa ah halka aad ka heli karto macluumaad dhammaystiran, oo dhammaystiran.
Waxaan wadnaa isbedel aan dooneyno inaan ku aragno bulshadeena.
Waxaan nahay dhimbiilaha dadka iyo fikradaha dhulka ka qaada.
Waxaan horseed u nahay isbedelka.
Nagu saabsan: Waxbadan Ka Baro
Goobaha ADRC ee Gobolka oo dhan
Ma ku nooshahay Degmada Brown? Adeegyada ADRC ayaa laga heli karaa gobolka oo dhan.
Warbixinta Sannadlaha ah ee ADRC
Akhri warbixinta 2021 si aad wax badan uga barato sida aan u sii wadnay u noolaanshaha Hadafkayaga, Himiladayada, iyo qiyamka annaga oo ka go'an macaamiisha, la-hawlgalayaasha, yoolalka, iyo riyooyinka.
2022-2024 ADRC - Qorshaha Qaybta Da '
Akhriso cidda ADRC u adeegto, waxay baahiyahoodu yihiin, iyo yoolalkayaga iyo istiraatiijiyaddeenna wax looga qabanayo baahiyahooda.
Warbixinta Beesha Iskaashi ee 2020
Warbixintani waxay adeegsaneysaa xog aruurinta iyada oo loo marayo dadaal iskaashi ah oo ka dhexeeya ADRC, Xarunta Qalalaasaha, iyo 211 ee Degmada County. Ujeeddada ayaa ah in la muujiyo qaababka baahiyaha ee bulshada iyo in lagu wacyi galiyo dadka siyaasadaha dejiya iyo dadweynaha wixii ku saabsan farqiga u dhexeeya adeegyada si loo abaabulo isbedel.
2019 ADRC Foomka 990
Canshuur xareynta loo baahanyahay ee IRS ee macaash la'aanta ah ee bixisa muuqaalka guud ee howlaha ururada, maamulka iyo macluumaadka maaliyadeed